Imigca ejikelezayo evela kwiipolines (Inyathelo 1) -I-Geofumed
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Imisele ezivela polylines (Inyathelo 1)
Ngaphambi kokuba sibone indlela ukudala umda ukuqala kuthungelwano lwamanqaku athathwe endle. Ngoku siza kubona ukuba ungayenza njani, ukusuka kwii-curve ezikhoyo kwimephu eskeniweyo.
Njengoko senza ngayo kwindlela yokuyila, masihlule kumanyathelo, ukwenzela ukuba eso sithuba asiphume ixesha elide kunokuba yinyoka.
Ngale nto, ukuba unolungelelwaniso olusecaleni kwi-UTM, umsebenzi wenziwe lula. Kule meko, iindlela zonxibelelaniso ezikufutshane neziphelo zichongiwe, ukuba iindlela ezinqamlezileyo zeekona bezinokuba zezona zilungileyo.
Amaphuzu afakwe ngomyalelo indawo, kunye nokungena kulungelelwaniso olwahlulwe yikoma, njengoko kubonisiwe kumfanekiso ongezantsi. Ukutshintsha ifomathi yenqaku kwisimboli ebonakalayo, yenziwe ukusuka Ifomathi> isitayile senqaku. Kodwa kuba ezi nguqulelo ze-Civil 3D zenza ukuba kube nzima ukufumana imenyu izixhobo, ungabhalela endala: ddptype ukusuka kumgca womyalelo, ngoko ukungena kwaye sikhetha uhlobo lwenqaku.
Kule nxalenye engaqhelekanga i-Microstation, apho ingongoma yimizila yobude bayo, kwaye ingaba nobukhulu obunamandla kunye nombono wemephu.
Ngoku sifaka umfanekiso, usebenzisa Faka> Ukubuyela kwakhona kumfanekiso weRaster. Sikushiya unike amandla amathuba okubeka Ipoyinti yokufaka y Isixa ukusuka kwisikrini.
Emva koko faka iphuzu ngakwesobunxele bee-coordinates uze uhambise imouse uze ubone ukuba umfanekiso ubukhulu becala.
Ukuba umfanekiso ugquma amachaphaza, thumela umva kwakhona. Oku kwenziwa nge Izixhobo> Bonisa iodolo> Thumela ngasemva.
Siza kudinga amanqaku kumfanekiso olingana nezo singene kuzo ngokusebenzisa ulungelelwaniso. Ngenxa yoko, sijoyina imigca esecaleni, ukuze sifumane iindlela zokudibana.
Ukusebenzisa umyalelo Imephu> Izixhobo> Iphepha leRubber, njengoko sasiyisebenzisayo iintsuku ezimbalwa ezedlule guqula i vectors, Sibonisa indawo eluhlaza njengesiseko, emva koko ebomvu njengesalathiso. Xa sele siyenzile kunye nazo zone, siyayenza ukungena kwaye umyalelo usicela ukuba sikhethe izinto esiza kuziguqula. Sibhala iingoma S, ukhetho khetha, kwaye sithinta umfanekiso, ngoko senza ukungena ngexesha lokugqibela kwaye apho sinalo.
Ngokufanayo kufana noko Warp del Umphathi weRaster kwi Microstation. Njengoko siyichaza ukuba uza kuyenza nini imifanekiso yokubeka imida Google Earth.
Jonga ukuba ngoku umfanekiso uhambelana njani namachaphaza abomvu, oluhlaza unokupheliswa. Ngoku umfanekiso ubonakalisiwe kwaye kwinqanaba elifanelekileyo ukuqala ukubhalwa kwamanani. Kule khonkco kunjalo Uyakubona isinyathelo se-2 ukugqiba lo msebenzi.
Inkinobho ye mouse
Ewe, andizange ndiqaphele ukuba kwakungekho nxu lumano kwisinyathelo esilandelayo. Ekupheleni kweposi ndibonise indlela yokubona kwinqaku apho ukuzaliswa komsebenzi kubhekisiwe.
EDUARDO O'CONNOR uthi:
Unomdla kakhulu, le miyalelo iyayisebenzisa imihla ngemihla. Amanyathelo alandelayo ukufumana iirebve kwi-scan, ndiwafumana njani?
lenddes mendez uthi:
Sawubona, unomdla kakhulu kwesi sihloko. Ndingayilanda njani le ngcaciso efanelekileyo?
Enyanisweni, ijikeleza kuphela, izikali kwaye ihamba. Ayikho into eyenziwa ngaphaya koko, njengoko ndibonayo.
Molo molo… Lo mxholo unika umdla, ngokunyanisekileyo andizange ndisebenzise lo myalelo “wePhepha lerabha”.
Xa wenza i-georeferencing ngomyalelo othi, ukuba uyaphambukisa umfanekiso? o Ukukhawuleza umfanekiso.
Kwakhona ngokwemiqulu ye-autocad, kunokwenzeka kuphela ngeendawo eziphezulu ze-4 (kwimeko yendawo) ngaba kunjalo? Yintoni eyenzekayo xa umfanekiso uphazamiseka waya kwinqanaba lomfanekiso?